« Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe : Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrama : Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy ? fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompon’ny ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrama : Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato an-tranoko no handova ahy. Ary, indro, ny tenin’i Jehovah tonga taminy hoe : Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan’ny lay Izy ka nanao hoe: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy hianao. Dia hoy Izy taminy : Ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an’ i Jehôvah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany. » Gen. 15:1-6.
Andriamanitra dia nanao an'i Abrahama ho fantsom-pahazavana sy fitahiana ka hisy hery miasa mangina hisandrahaka avy aminy ary hanana vahoaka eto an-tany Andriamanitra. Teto an-tany i Abrahama mba hitaratra ny toetran'i Kristy amin'ny alalan'ny fomba fiainany. Tamin'izy nandre ilay antson'ny lanitra dia tsy olo-manan-daza tsy akory izy na mpanao lalana na mpandresy lehibe. Mpiandry ondry tsotra izy, nonina an-day, saingy nampiasa olona betsaka hampandroso ny fivelomany. Ary ny voninahitra nomena azy dia noho ny fahatokiany an'Andriamanitra, noho ny fahamarinan-toetrany sy ny fahitsiany.
Hoy ny Tompo momba azy: “Hafeniko an'i Abrahama va izay hataoko? Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny Jehovah hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehovah amin'i Abrahama izay efa nolazainy taminy.” - Gen. 18:17-19
Tsy nisy fitiavan-tena ny fiainan'i Abrahama ka izany no nahatonga azy “ho fizahan'izao rehetra izao na anjely na olona.” - 1 Kor. 4:9. Ary ny Tompo dia nilaza fa hotahina izay mirary soa ho an'i Abrahama fa ho voaozona kosa izay manozona azy. Tamin'ny alalan'ny fiainam-pivavahana naneho fahafantarana marina an'i Jehôvah no niampitan'izany tamin'olona an'arivo arivony; ary ny fahazavany no niparasaka tamin'ny lalan'ireo tia fiainam-bavaka, fiainam-pinoana, fanoloran-tena ary fankatoavana toa azy rahateo.
Nanana fahafantarana an'i Kristy i Abrahama; satria ny Tompo nampiparasaka fahazavana taminy ho voninahitr'ilay Mpanavotra an'izao tontolo izao. Ary nampahafantariny ny tao an-tranony mbamin'ny zanany fa ny fanatitra dia tandindon'i Kristy, Zanak'Ondrin'Andriamanitra, maty noho ny fahotan'izao tontolo izao. Noho izany dia nitaona olona maro izy hiova fo ka hino an'Andriamanitra velona sy marina.